पूर्व आर्मीको निधनको घटना थप रहस्यमय : संगै बसेका श्रीमानलाई साथीले बोलाएर लगे तर जिउँदो फर्केनन् ! – Aaj ko Sandesh
मुख्य पृष्ठ /News/पूर्व आर्मीको निधनको घटना थप रहस्यमय : संगै बसेका श्रीमानलाई साथीले बोलाएर लगे तर जिउँदो फर्केनन् !
काठमाडौ । मकवानपुर मनहरी गाउँपालिका ६ सुनाचरीमा पूर्व आर्मी अजय सुनार विकको निधन रहस्यम हुँदै गएको छ । उनको अन्त्यष्टि गरिसकेपछि घटना थप रहस्यम बन्दै गएको हो । तिहार अघि साथीहरुसंग तास खेल्न गएका अजय भीरवाट लडेर निधन भएको भनिएको थियो । तर घटनास्थल र प्रहरीकै भनाई अनुसार घटना रहस्यम भएको हो ।
स्थानियबासीन्दाले बताए अनुसार साथीहरु मिलेर तास खेलिरहेका थिए त्यही बेलामा प्रहरी आयो भनेर उनीहरु दौडीए त्यही बेलामा भीरवाट लुडेुर निधन भएको खबर आएको बताए । तर प्रहरी प्रशासनले त्यस्तो कुनै गस्ती प्रहरीको नगएको बताएपछि घटना रहस्यमय भएको पत्ता लागेको हो ।
श्रीमानको किरिया बसेकी उनकी श्रीमतिले अहिले आफुलाई स्थानिय नेताहरुले विभिन्न अफर लिएर आउने गरेको बताएकी छन् ।गाउँका नेताहरु हामी क्षतीपुर्ती दिन्छौं भन्दै आउनुहुन्छ उनले भनिन्, अरुबेला उफ्रिने रहेछन् अहिले भने चुपचाप बसेका छन् । उनले प्रहरी प्रशासनले पनि आफुहरुलाई सहयोग नगरेको बताएका छन् ।
२७ गते शव अन्त्यष्टि गरेपछि मात्र उनीहरु घटनास्थलमा पुगेको बताएका छन् । उनीहरुले घटनास्थलको अवस्था शंकास्पद देखिएपछि उनीहरुले अनुसन्धान गर्न आग्रह गरेका छन् ।
बच्चा नहुने महिलालाई बच्चा हुने बनाइदिने भन्दै बाबा आफैं जुटेपछि…..भिडियो सहित हेर्नुहोस
लकडाउनमा करोडपति बुवाआमा घरनिकाला, औ’ष’धी खाने पैसा नभएपछि धरधरी रोइन् [भिडियो सहित]